Iimayl: info@drotrong.com 0
Farriimaha Agaasimaha Guud
Alaabada Daryeelka Caafimaadka
Saldhigga dhirta Epimedium
Epimedium waa daawo dhireedka Shiinaha si loo kaydiyo kalyaha loona xoojiyo Yang, oo badanaa loo yaqaan "plant Viagra". Waxay leedahay shaqooyinka loo yaqaan 'Tonifying Kidney Yang', xoojinta murqaha iyo lafaha, daadinta dabaysha iyo qoyaanka. Waxaa loo adeegsadaa kacsi la'aanta shahwada, ...
Ha dhayalsan Berberine
Berberine waxaa loo yaqaan jiil cusub oo daawo sixir ah. Haddaba, waa maxay waxtarkeeda iyo isticmaalkeedu? Nolosha, dadka badankood waxay rumeysan yihiin in dadka badankood ay qaateen Kiniiniyada Berberine, haddaba, ma ogtahay waxa ay leedahay waxtarka iyo shaqada ay leedahay berberine? Maxaa loogu yaqaan daawada ilaah? ...
Wax ku oolnimada iyo waxqabadka Purple Yam
Yaan casaan, oo sidoo kale loo yaqaan "Purple ginseng", wuxuu leeyahay hilib casaan guduudan iyo dhadhan fiican. Waxay hodan ku tahay nafaqooyinka, oo ay ku jiraan istaarijka, polysaccharide, protein, saponins, amylase, choline, amino acids, fitamiino, kaalshiyam, birta, zinc iyo in ka badan 20 nooc oo nafaqooyin ah. Sida laga soo xigtay t ...
Isbedelka horumarka ee warshadaha dhirta dabiiciga laga soo saaro
Sanadihii la soo dhaafay, horumarinta warshadaha dawooyinka waxay la kulantay dhibaatooyin badan, laakiin "warshad soo saarista dhirta", ha noqoto dhoofinta ama iibinta gudaha, waxay si tartiib tartiib ah u noqotay warshadaha ugu kobcaya soosaarka dhaqameed ee Shiinaha. Sida laga soo xigtay c ...
Kaabista dhirta ee loogu talagalay taageerada libido, xoojinta waxqabadka, oo lagu daro adkeysi iyo rabitaan.
Sheeko dhaqameed Shiineys ah: waxaa la sheegaa in waqooyiga iyo boqortooyooyinkii koonfureed, adhijir duug ah uu ogaaday arrin la yaab leh markii uu adhiga daajinayay. Wanku markuu cunay cawska yaabka leh ee kaynta, guskiisu wuu fududahay in la kaco, iyo tirada laabta laxda ...
Siidaynta Alaabta Cusub ----- Shaaha loo yaqaan 'Cyclocarya Paliurus' ee sonkorowga sanadka cusub, wax soo saar cusub. Si loo wanaajiyo saaxiibo badan oo leh astaamaha hyperlipoidemia, hyperglycemia iyo hypertension, shirkadeena ayaa soo saareysa badeecad daryeel caafimaad oo cusub - - Shaaha dhirta loo yaqaan 'Cyclocarya Paliurus tea'. ...
Kirismaska ​​ayaa soo socda
Sannad kasta 25-ka Diseembar, dhalashadii Ciise Masiix waxay ahayd maalin xusuus u leh muslimiinta, oo loo yaqaan Kirismaska. Kirismaska ​​ayaa loo dabaaldegaa maalinta waana labadaba cibaado diineed oo muqadas ah iyo ifafaale dhaqan iyo ganacsi adduunka oo dhan ah. Muddo laba sano ah, dadka ku wareegsan dixiriga ...
5 Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Daawada Dhaqanka Shiinaha
Daawada dhaqameed ee Shiinaha waa nooc ka mid ah nidaamka daaweynta dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee la adeegsaday in ka badan laba kun oo sano. Waxaa loogu talagalay in lagu kiciyo hababka bogsashada ee jirka, waxayna kuu keeni kartaa faa iidooyin badan oo caafimaad labadaba jir ahaan iyo maskax ahaanba ...
Faa'iidooyinka dawada dhaqameed ee Shiinaha inta lagu gudajiray COVID-19
Bilowgii sanadkaan, faafida faafa, waxeyna China u keentay khasaaro weyn. Cudurka faafa wuxuu taabtay qalbiyada qof kasta oo Shiine ah. Xaalada adag ee ka hortaga iyo xakamaynta coronavirus-ka cusub, TCM waxay siisay ciyaar buuxda faa'iidooyinkeeda gaarka ah iyo garabka sidaa ...
Waa maxay Suan Zao Ren ama Sour Jujube Seed?
Sanado aan la tirin karin oo tijaabo caafimaad iyo qalad ah, adeegsiga dhirta, abuurka, iyo macdanta daraasad ku saabsan herbology ayaa la soo saaray loona kala saaray isticmaalkooda Daawada dhaqameed ee Shiinaha. Mid ka mid ah qeybahan waa geedo dajiya oo dheellitira shucuurta, ama ...
Ma Ogtahay Asalka iyo Faa’iidada Gocashada Ariga?
Halyeey baa jiray boqortooyooyinkii koonfurta iyo waqooyiga. Adhi ayaa helay dhacdo xiise leh oo ah in Ram uu ku jiray waqtiyo oestrus badan ka dib markii uu cunay nooc ka mid ah cawska, si adag u taagay, waqtiga oo dheeraaday isla markaana "jacayl" la yeeshay idaha marar badan. ...
Tayada ugu sareysa ee abuurka ilaa iibinta
Waxaa qoray admin on 20-09-03
Tayada ayaa ah cunsur muhiim u ah iibsashada macaamiisheena, kuwaas oo ku kalsoon in aan siino alaab dhireed oo aamin ah oo dhab ah oo ay si kalsooni leh ugu isticmaali karaan dhaqankooda. Tayada ayaa u leh bukaanada, kuwaas oo ku tiirsan xirfadlayaashooda TCM si ay u siiyaan daaweyn dabiici ah oo dhir dabiici ah ...
Cinwaanka: NO.88 South Garden Road, Degmada Gaoxin, Chengdu, Shiinaha
Is-qor si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo dhacdooyinka (dhiirrigelin, alaabooyin cusub iwm)